Wafdi uu Horkacaayo Maamulka Gobolka Nugaal oo Gaaray Deegaanka Suunajiif ee Gobolka Nugaal • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wafdi uu Horkacaayo Maamulka Gobolka Nugaal oo Gaaray Deegaanka Suunajiif ee Gobolka Nugaal
Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa gaaray deegaanka Suunajiif oo ka tirsan Gobolka Nugaal.
Guddoomiyaha wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa qayb ka ah maamulka Degmada Garoowe iyo qaar ka mid ah saraakiisha gobolka ayaa gaaray deegaanka Suunajiif ee Gobolka Nugaal ee dawladda Puntland.
Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa Horseed Media u sheegay in deegaanka Suunajiif ay u tageen sidii ay maamulka degmada uga hadli lahaayeen xaalada amaan ee degmada,isagoona sheegay in ay kula kulmeen guddoomiyaha Suunajiif,Taliyaha deegaanka,Culumaâ€™udiin,Odoyaasha iyo wax garadka deegaanka Suunajiif ee gobolka Nugaal.
Wuxuu sheegay in saraakiisha ay la kulmeen ay kawada hadleen adkaynta amaanka guud ee deegaan Suunajiif isla markaana dadka khal khalka gelinaya deegaanka hal meel looga soo wadajeesto sidii wax looga qaban lahaa dadkaasi amni darada caadeystay.
Guddoomiye Cabdi Xiris Cali Qarjab ayaa sidoo kale sheegay in ay isla soo qaadeen masâ€™uuliyiintii ay kulmeen arrimaha dadka ka yimaada Koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo soo galaya deegaanada Puntland oo il gaar ah lagu hayo dhaqdhaqaaqooda wixii wada falal amniga lidi ku ahna layska qabto oo sharciga la hor keeno.
Xaalada guud ee deegaanka Suunajiif ayuu guddoomiyuhu ku sifeeyey in ay iminka tahay mid wanaagsan oo dhibaato aysan ka jirin dadkuna ay nabad kuwada nool yihiin.
Arrimaha Burcad badeeda ayey si weyn uga wadahadleen maamulka gobolka iyo kan deegaanka Suunajiif,waxayna isla meel dhigeen in si wadajir ah ay wax uga qabtaan.
Arrimahaan ayaa waxay ku soo beegmayaan xili maamulka gobolka Nugaal uu dhawaan shaaciyey in ay qadayaan talaabooyin lagu sugayo amaanka guud ee gobolka.